Tababare Ole Gunnar Solskjær oo farriin muhiim ah u diray ciyaartoyda Man United ka hor kulanka Leicester City – Gool FM
Tababare Ole Gunnar Solskjær oo farriin muhiim ah u diray ciyaartoyda Man United ka hor kulanka Leicester City
(Manchester) 24 Luulyo 2020. Qof walba wuxuu sugayaa kulanka ku dhax mari doona Axada kooxaha Manchester United iyo Leicester City garoonka King Power, kaasoo ay kaga soo xiran doonaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Manchester United ayaa u baahan kaliya hal dhibic si ay ugu yaraan ugu dhameysato xilli ciyaareedkan booska afaraad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, isla markaana ay u xaqiijiso u soo bixitaankeeda tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Haddaba tababare Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlayay kulanka Leicester City ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in ciyaartoyda Red Devils ay sarre u qaadaan diirad saaridooda, sababtoo ah hal qalad oo kaliya ayaa u diidi kara riyadooda kaga aadan inay u soo baxaan tartanka Champions League.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysigii ugu dambeeyay uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Diirad saaridda waa muhiim sababtoo ah marka aad la ciyaareyso koox heysata ciyaartoy tayo sare leh, waxaad la kulmi kartaa ciqaab culus haddii aad lumiso diiradda”.
“Waxaan ku gali doonaa kulankaas maskax weyn, sababtoo ah ma sugeyno ciyaar kale ee soo socota xilli ciyaareedkan, waxayna noqon doontaa dhamaadka safarka”.
“Waxaa ina hor taala hal talaabo oo kaliya, waana inaan qaadno, si aan ugu dambeyntii u guuleysano, waxaan runtii soo marnay jid dheer”.
RASMI: Jordan Henderson oo ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka sanadka ee qorayaasha kubadda cagta
“Ilaalinta Saalax iyo Mané ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee suuqa kala iibsiga” – Halyey kooxda Liverpool ah